China Ultrasonic yakakosha CBD mafuta emulsifier Kugadzira uye Fekitori | Hangzhou nemazvo
Cannabis zvinyorwa (CBD, THC) ane hydrophobic (kwete mvura inogadziriswa) mamorekuru. Kuti tikunde kusakanganisika kwe cannabinoids mumvura yekumikidza zvinodyiwa, zvinwiwa uye mafuta, nzira chaiyo yekumisikidza inodiwa.
Ultrasonic yakakosha CBD mafuta emulsifier shandisa iyo yekumisheni sheer simba yeiyo ultrasonic cavitation kudzikisa iyo yekudonha saizi ye cannabinoids kugadzira nanoparticles, inozove diki pane 100nm. Ultrasonics ndiyo inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemishonga muindasitiri yemishonga yekugadzira yakagadzikana mvura inogadziriswa nanoemulsions.
Oiri / Mvura Cannabis Emulsions - Nanoemulsions maemulsion ane kadonhwe kadikidiki ayo ane akati wandei anoyevedza zvivakwa zvemakomboniidid akaumbwa anosanganisira mwero wepamusoro wekujekesa, kudzikama uye wakaderera viscosity. Zvakare, nanoemulsions inogadzirwa neiyo ultrasonic kugadzira inoda yakaderera surfactant kuwanda kubvumira kune kwakanyanya kunaka kuravira uye kujekesa muzvinwiwa.
Titanium chiwanikwa runyanga, girazi matangi.
Inogona kudzora 10L mvura, kubva
Inogona kudzora 30L
JH-BL5L / 10L / 20L, mechi pamwe nechiller.
1.Nekuda kune iyo CBD droplet yakapararira kune nanoparticles, kudzikama kwemamulsion kwakawedzera zvakanyanya. Ultrasonically inogadzirwa emulsions inowanzo gadzikana-yega pasina kuwedzerwa kweiyo emulsifier kana surfactant.
2.For CBD mafuta, nano emulsification inovandudza cannabinoids kutora (bioavailability) uye inogadzira yakanyanya kuita. Naizvozvo yakaderera cannabis chigadzirwa doses inogona kusvika kune imwechete mhedzisiro.
3.Hupenyu hwemidziyo yedu hunopfuura maawa zviuru makumi maviri uye inogona kushanda ichienderera kwemaawa makumi maviri nemana pazuva.
4.Integrated kutonga, imwe-kiyi kutanga, nyore mashandiro. Inogona kuve yakabatana nePLC.
Pashure: 20Khz ultrasonic ichiparadzira homoegnizer muchina
Zvadaro: Ultrasonic chirimwa pigments pectin yekubvisa muchina
ultrasonic CBD mafuta emulsification michina
Ultrasonic cannabis mafuta emulsification mudziyo f ...
Ultrasonic nano CBD oiri emulsification muchina